ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် တူးမြောင်း du မီဒီ, တစ်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များနှင့်နေဆဲမူရင်းသင်တန်းအောက်ပါအတိုင်းကြောင့်ဥရောပမှာရှေးအကျဆုံးအတုရေလမ်း. Pierre Paul Riquet ၏ဤလုပ်ငန်းကိုပြီးစီးခဲ့သည် 1681. လမ်းတစ်လျှောက်, အဆိုပါမီဒီဆင်းဒီလိုမြင်ကွင်း, သငျသညျက Le Somail နှင့် Carcassonne တွေ့နိုင်ပါသည်, နှစ်ခုချစ်စရာကောင်းအလယ်ခေတ်အခြေချနေထိုင်. တဖန်သင်တို့ကိုချစ်လျှင် ကောင်းသောအစာအာဟာရ နှင့် အကြီးအစပျစ်ရည်ကို, သငျသညျမီဒီရဲ့နာမည်ကျော် Minervois နှင့် Corbieres ကြိုးစားနိုင်, နှင့် cassoulet, တစ်ဦး ဒေသခံခဲဖွယ်စားဖွယ်.
အဘယ်အရာကိုရဲ့ အထူးသဖြင့်ချစ်စရာကောင်း လမ်းတစ်လျှောက်သင်မြင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဘုံဗိမာန်, အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, နှင့် quaint ဟောင်းမြို့ရွာ. သဘာဝတရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူများသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောသဲကန္တာရနှင့်ပျော်မွေ့ကြမည်မှာသေချာသည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ကြွယ်ဝမှု.
ထိုအခါ Ypres လည်းမရှိ, သမိုင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုနှင့်ထူးခြားသော Flemish မြင်ကွင်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအရပျ, အသံ, နှင့်အရသာ. အရသာဘယ်လ်ဂျီယံရန်သင့်လမ်းရွက်လွှင့် လက်ဖြစ်ချောကလက်, တက်ကြွခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်သို့မဟုတ် ဘယ်လဂျီယံဘီယာ. တိုင်းပြည်ကခံစားမှုအားလုံးကိုကြည်နူးစွာဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ်.
စာရင်းမရှိ အကောင်းဆုံးဥရောပခရီးစဉ် နယ်သာလန်မပါဘဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်. ဒါကဥရောပအကောင်းဆုံးရုပ်သံလိုင်းနှင့် riverboat အားလပ်ရက်ပူဇော်ကြောင်းနေရာများပါဝင်သည်. ရေလမ်း၏နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာအပေါ်နေရာမှကိုရှာဖွေခဲ့, ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များကိုမှမရှိစေရန်, သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ, နှင့်ရွက်၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)